सुनको भाउमा आइसक्रिम, मूल्य सुनेर उड्नेछ होस - Netizen Nepal
सुनको भाउमा आइसक्रिम, मूल्य सुनेर उड्नेछ होस
in अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, जानकारी, रोचक
काठमाडौँ, ७ साउन । तपाइले जीवनमा सबैभन्दा महँगो चिज के खानु भएको छ ? त्यो कति खानु भयो ? अवश्य पनि तपाइलाई अचम्म लाग्ला की यही दुनियाँमा एक स्कुप आइसक्रिमलाई एक तोला सुन किन्न पुग्ने पैसा पर्छ । र, त्यस्तो आइसक्रिम किनेर मानिसहरू खाइरहेका छन् ।
सो भिडियो र फोटोमा संसारकै सबैभन्दा महँगो आइसक्रिमको बारेमा बताइएको छ । यो दुनियाँको सबैभन्दा महँगो आइसक्रिमको नाम हो ब्लाकडाइमन जसको एक स्कुप खरिद गर्न ८४० अमेरिकी डलर अर्थात् एक लाख नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ ।
खाने ग्राहकको आँखामै अगाडी यो आइसक्रिम बनाइन्छ । र, ग्राहकलाई दिनु पूर्व यसमा २३ क्यारेटको खानयोग्य सुनको गार्निस गरिन्छ । त्यति मात्रै होइन यो आइसक्रिम पस्कने तरिकासमेत उस्तै भिन्न छ । यो आइसक्रिम सर्भ गर्ने कप सुनले लेपन गरिएको हुन्छ । यो आइसक्रिम दुबइको जुमेरियाह रोडमा अवस्थित स्कुपी क्याफेमा मात्रै पाइन्छ । यो क्याफेमा सुनबाटै बनेको ल्याते कफी पनि बिक्री गरिन्छ । जसको नाम गोल्डकफि राखिएको छ । एजेन्सी